Global Aawaj | रुपन्देहीको तिलोत्तमामा अर्की युवतीको रहस्यमय मृत्यु रुपन्देहीको तिलोत्तमामा अर्की युवतीको रहस्यमय मृत्यु
३१ जेष्ठ २०७९ 2:24 pm
बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमामा एक युवतीको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका ६ सेमरीचोककी २५ वर्षीया सुविना गिरीको शव झुण्डीएको अवस्थामा फेला परेको परिवारको दावी छ ।
पति सन्जु गिरीले आफूहरुले संचालन गर्दै गरेको होटलमा राति करिब १ बजे झुण्डीएको अवस्थामा फेला परेको र उद्धार गरी अस्पतालमा लगेको दावी गरेका छन् । सन्जुले राति २ बजे क्रिमसन अस्पताल मणीग्राममा ल्याउँदा चिकित्सकहरुले मृत घोषणा गरेका थिए । यद्यपि सुविना झुण्डीएको र मृत्युभएको बारे वरपर छिमेकीले समेत थाह नपाएको बताएका छन् ।
आफन्तले आफैले कुटपीट गरेर झुण्डाएको बहाना गरेको बताएका छन् । मृतककी फुपु क्षमा गिरीले शरिरभरि नीलडाम भएकाले पतिले हत्या गरेको वा झुण्डाएको दाबी गरिन् । आफन्तले घटनाको सत्यतथ्य माग गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले घटनाको प्रारम्भीक अनुसन्धान थालेको छ ।
क्रिमशन अस्पतालमा राखेको शव अहिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएको छ । अनुसन्धानपछि मृत्युको कारण बारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी निरीक्षक सन्तोष घिमिरेले बताए । मृतकका २ जना नाबालक छोराछोरी छन् । यसअघि २ महिना अघि रहस्यमय मृत्यु भएकी अमृता खत्रीकाे घटना बारे अझै टुङ्गो लागेको छैन ।
गत चैत ३० गते अमृताको रहस्यमयी मृत्यु भएको थियो । घटनाको टुङ्गो नलागेपछि हालसम्म उनको शवलाई दाहसंस्कार समेत गरिएको छैन ।
अमृता मृत्यु प्रकरण : गृहमन्त्रीकै नगरमा दियो बालेर न्याय खोज्दै
पर्खाल भत्किएर पुरिँदा एकको मृत्यु प्रजातन्त्र होइन गठबन्धनतन्त्र ! सर्वोत्तम लिटोको प्याकेटमा कीरा कसरी लाग्छ हैजा ? यी हुन् लक्षण र रोकथामका उपाय सुनको मूल्य प्रतितोला तीन सय रुपैयाँले घट्यो दक्षिण कोरियामा २०२३ का लागि श्रमिकको तलब ५ प्रतिशतले वृद्धि सयपत्री हाइड्रोपावरको आईपीओ भर्ने समय थप ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु राजस्थानमा धार्मिक तनावः मोदीलाई धम्की, इन्टरनेट सेवा बन्द रुपन्देहीको सैनामैनाका एक युवा मृत अवस्थामा फेला फुटबलर भरत र नवयुग एनएसी प्रतियोगिता खेल्न अमेरिका प्रस्थान डाइभर्सन निर्माणपछि खुल्यो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, कस्ताे छ अन्य सडककाे अवस्था ? मध्यअसारसम्म लुम्बिनीमा ३३ प्रतिशत मात्र रोपाईं आज पनि देशभर वर्षाको सम्भावना श्रीमान १० वर्ष वेपत्ता भए श्रीमतीलाई एकल भत्ता दिने प्रस्ताव रोटरी क्लब भैरहवाद्वारा तिलोत्तमास्थित विद्यापिठका विद्यार्थीलाई कम्प्युटर तथा झोला वितरण एमाले निकट युवा संघको धान राेपाइँमा कुटाकुट बुटवलमा जंगली च्याउ खाँदा ६ जना बिरामी, अवस्था गम्भीर असारे–१५ः ‘हिलोमा रमाउनेहरुको दाउ–१७’ काठमाडौंमा १४ जनामा हैजाको संक्रमण पुष्टि